Ungayakha kanjani i-automation yasekhaya nge-Arduino igxathu negxathu | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
UJoaquin Garcia Cobo | | I-Arduino, I-Robotics
Una okuzenzakalelayo kwasekhaya yindlu equkethe izinhlelo ezimbili, uhlelo lwangaphakathi nohlelo lwangaphandle, okuyi zisetshenziselwa ukukala, ukulawula nokwenza ngokuzenzakalela konke okwenzekayo maqondana nendlu. Ukufeza lokhu, amadivayisi ahlakaniphile axhunywe kumasistimu aqoqa imininingwane esiyidingayo futhi aphendule nezicelo zethu.
Impumelelo ye-automation yasekhaya ezinyangeni ezedlule kungenxa yokuthi intengo yalawa madivayisi eyehle kakhulu futhi ngenxa yeHardware Hardware, noma iyiphi idivaysi ingashintshwa kunoma yiluphi uhlobo lwekhaya noma isimo. Izinto esingakwazi ukuzakhela zona ngokwethu.
1 Iziphi izinto engizidingayo ukudala i-automation yami yasekhaya?
2 Yini okufanele ngiyenze ukudala ukukhanya okuhle?
3 Yini okufanele ngiyenze ukuze ngivikele i-automation yami yasekhaya?
4 Yini okufanele ngiyenze ukuze ngibeke umoya opholile endlini yami?
5 Yini okufanele ngiyenze ukuhlobisa indlu yami?
6 Ngingaba kanjani nobhasikidi wemishini yami yasekhaya?
7 Ingabe lokhu kungathuthukiswa?
Iziphi izinto engizidingayo ukudala i-automation yami yasekhaya?
Ngaphambi kokukhuluma ngamaphrojekthi amancane noma amagajethi azosisiza ukuthi sakhe i-automation yethu yasekhaya, sizokwenza uhlu lwezinto ezijwayelekile esizodinga ukuzenza zisebenzele ekhaya.
Okokuqala kunakho konke ukuthi ube i-router nokuxhumeka kwe-inthanethi okunamandla okusebenza kuyo yonke indlu, ngeke kube khona izindawo ezifile noma amakamelo lapho isenzo se-router singakwazi ukufinyelela khona. Ezimweni eziningi ngeke sidinge ukuxhumana kwe-Intanethi, kepha sizosebenzisa i-router. Kwezinye izimo, njengokuvikeleka kwasekhaya, sidinga ukufinyelela kwi-Intanethi, ngakho-ke kokubili i-router nokufinyelela kwe-Intanethi kubalulekile.
Ungayibuka kanjani iNetflix ku-Raspberry Pi
Enye into ejwayelekile yile Ibhodi le-Raspberry Pi. Ngaphezu kokudingeka kwamanye amaphrojekthi, ibhodi le-Raspberry Pi lingasebenza njengeseva elilawula zonke izicelo nama-oda wezinto ezahlukahlukene ezihlakaniphile. Iphuzu elihle lokusebenzisa i-Raspberry Pi yile ubukhulu bayo obuncane, amandla ayo nentengo yayo ephansi.
U-Arduino Yún futhi Arduino UNO Bazophinde babe ngabangane abadingekayo ukudala i-automation yasekhaya. Kungaba ukulawula ukusebenza kwe-air conditioner noma ukulawula ukukhiya kwedijithali, la mapuleti ayadingeka, angabizi futhi athandwa kakhulu.
I-Los izinzwa zizodingeka futhi, kepha kulokhu kufanele sibekezele kakhulu futhi sazi ukuthi siyikhetha kanjani kahle inzwa ngoba izobe isekhaya lethu elihlakaniphile, isebenza usuku lonke, izinsuku ezingama-365 ngonyaka, okusho ukuthi alukho uhlobo noma uhlobo lwenzwa oluzosebenza.
Ikusasa le-automation yasekhaya ukuthi isebenza ngemiyalo yezwi, kepha njengamanje lokho akusebenzi kuyo yonke imikhakha nakwezinto eziningi esizodinga ukuba nazo i-smartphone enokufinyelela kwe-inthanethi. Ngokuvamile, ngincoma ukusebenzisa i-smartphone ye-Android ngoba abakhiqizi abaningi basebenza kakhulu ngalolu hlelo lokusebenza kune-Apple ye-Apple.
Amaphrojekthi we-Raspberry Pi
Yini okufanele ngiyenze ukudala ukukhanya okuhle?
Ukukhanyiswa kwe-automation yasekhaya mhlawumbe yilokho okutholwe kakhulu eminyakeni yamuva. Empeleni sinakho amamodeli ahlukahlukene wama-smart bulbs angafakwa kunoma yisiphi isibani futhi ngokuxhumeka okuhle, singakushintsha ukukhanya futhi sakhe izindawo ezahlukahlukene ngokuya ngesikhathi sosuku noma lokho esikuthandayo. Njengamanje lawa ma-smart bulbs eza ngezindleko ezinkulu, okusho ukuthi akuwona wonke umuntu ongakwazi ukuba nawo wonke ama-bulbs alolu hlobo.
Enye indlela yalokhu ukusebenzisa Izibani eziholwa yi-RGB bese ubaxhuma ebhodini le-Arduino Yun, ngalokhu singakwazi ukulawula ukukhanya kwegumbi endlini yethu. Izibani eziholwa yi-RGB zishibhile kakhulu kune-smart bulb futhi ukwakheka esingakunikeza kujabulise kakhulu kune-bulb yendabuko, kodwa kuyiqiniso ukuthi i-smart bulb inokufakwa okusheshayo nokulula.
Yini okufanele ngiyenze ukuze ngivikele i-automation yami yasekhaya?
Ukuphepha kwekhaya kuyinto entekenteke futhi ebaluleke kakhulu. Njengamanje, ukwakha indlu ezisebenzelayo ekhaya kunamaphrojekthi ahlukahlukene okhiye abavulekile avula ngawo isigxivizo somunwe noma nge-smartphone.
Isinyathelo sesibili kungaba ukufaka izinzwa ezinyakazayo kuwo wonke amakamelo ukudala i-alamu yasekhaya, kepha lawa maphrojekthi awasebenzi kahle. Kunoma ikuphi, ezokuphepha zisalinde ukuzenzakalela kwasekhaya yize ngazi abaningi abanemizi engahlakaniphi enezinkinga ezifanayo.
Yini okufanele ngiyenze ukuze ngibeke umoya opholile endlini yami?
Isimo somoya sendlu ebusayo sinzima impela, kepha nasendlini ejwayelekile. Okokuqala kufanele siqiniseke ukuthi indlu ivinjelwe kahle. Lokhu kubalulekile ngoba izikhathi eziningi lapho sizosebenzisa khona umoya opholile ohlakaniphile ngeke sibe sekhaya futhi uma ingavinjelwe kahle, sizomosha ukushisa noma umoya opholile ngaphandle kokuthola umphumela oyifunayo.
Lapho nje indlu esezisebenzele ekhaya ihlukanisiwe, kufanele sifake inzwa ngayo ibhodi ye-Arduino Bluetooth kuwo wonke amagumbi. Imininingwane yokushisa izothunyelwa kukhompyutha emaphakathi noma kwi-Raspberry Pi. Ku-Raspberry Pi sizosebenzisa ama-algorithms ukuze lapho igumbi lifinyelela izinga lokushisa elithile isimo somoya noma ukufudumeza kuyasebenza.
Kulesi sici se-automation yasekhaya kunzima ukukufeza njengoba ama-air conditioners nezifudumeza zingahlakaniphile futhi okuwukuphela kwento yokwenza lokhu ukukhetha izixazululo zokuthengisa ezibiza kakhulu futhi ezingahambelani kakhulu nobunye ubuchwepheshe. Kunoma ikuphi, kancane kancane inqubekelaphambili iyenziwa kulesi sici se-automation yasekhaya.
Yini okufanele ngiyenze ukuhlobisa indlu yami?
Phambilini sikhulume ngendlela yokwenza ngokwezifiso ukukhanya noma kunalokho ungaba kanjani nokukhanya okuhlakaniphile. Futhi singakha intambo yomculo exhuma ekukhanyeni, ngaleyo ndlela yakhe izindawo ezihlanganisa amalambu nomculo. Isixazululo esisheshayo kuleli cala ukuba nesipikha esihlakaniphile.
Kulesi sici kunezinhlobo eziningi esingazithenga njenge-Amazon Echo, iGoogle Home noma iSonos. Kepha futhi singakha isipika sethu esihlakaniphile. Kunamaphrojekthi amaningi azama ukudala isipikha esihlakaniphile. Kule ndaba, isipikha sivelele IGoogle inikelwe eceleni kweRaspberry Pi Zero. Isixazululo esinamandla, samahhala nesishibhile kunezinye izikhulumi ezihlakaniphile. Uma sikhetha ikhambi lamahhala, kufanele khumbula ukuthi sizodinga isitoreji esikhulu ukugcina umculo.
Ngingaba kanjani nobhasikidi wemishini yami yasekhaya?
Ngokumangazayo, esinye sezici ezinhle kakhulu esifinyelelwe kumishini ezenzekelayo yasekhaya ukwenziwa kwabasizi ababonakalayo. Impumelelo yabo ibe njengokuthi balethwe kuma-smartphone, amaphilisi nakwamanye amadivayisi.
Ukuze sibe nomsizi wasendlini noma umsizi obonakalayo kufanele sibe ne-Artificial Intelligence efakwe kuseva emaphakathi noma ebhodini le-Raspberry elixhunywe kuwo wonke amadivayisi we-smart. Kunezindlela eziningi zamahhala ezinjenge Jasper o I-Mycroft noma singakhetha futhi izixazululo zokuphathelene njenge-Alexa evela ku-Amazon Echo noma i-Google Assistant kusuka kwaGoogle Home. Ukuzikhethela kungokwakho.
Ingabe lokhu kungathuthukiswa?
Vele kungathuthukiswa. Ezintweni eziningi esizibalile banamathuba amaningi okuthuthuka kepha kokunye esingakabonisanga kanjani ekukhanyeni, kukhona nendawo yokwenza ngcono nokwenza ngezifiso.
Konke kuzoncika kithina, ezindlini zethu nakulwazi lwethu nge-Free Hardware. Ezimweni eziningi singenza amadivayisi enziwe waba ngowakho futhi ahlakaniphile axazulula inkinga noma enza i-automation yasekhaya ihlakaniphe, iyona ehamba phambili ye-Free Hardware Awucabangi?
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Arduino » Ungayakha kanjani i-home automation igxathu negxathu
Umsebenzi omuhle ungisize kakhulu